EyeThupha 28, 2018 admin
exchange Crypto Huobi ukuba afumane ngokuqinileyo loluntu $ 77M deal
Cryptocurrency exchange Huobi iceba ukuba i zabelo likhulu inkampani yoluntu ekuluhlu e Hong Kong - intshukumo enokuthi, ukuba lugqitywe, ukuba uvule umnyango Huobi ukuya uluntu ngendlela kombuso reverse. Ngokutsho Ukuvezwa nezabelo ku Hong Kong Stock Exchange, ukuba yinkampani karhulumente ukudlulisela ngaphezu 221 million izabelo zawo eziqhelekileyo Li Lin, usihlalo we Huobi Group, nge eziliqela nakumagatya exchange ngayo.
Li silungele ukuba ngumnikazi ekugcineni 73.73% of Pantronics njengoko shareholder enkulu kakhulu. ibitheni, ukuba siphunyeziwe, akwazi ukunika Huobi ithuba lokuba athathe phezu inkampani yoluntu kwaye ngenisa kwiimalike zemali zasesekondari - inkqubo eyaziwa njenge kombuso reverse. A omele Huobi uthe exchange crypto nangoku ilindele isiqinisekiso kunye nemvume evela Hong Kong Stock Exchange.
Enkulu izilingo moya Russian blockchain ukulandelela iintlawulo amafutha
S7, enye moya ezinkulu Russia, ihlolwe isicelo blockchain esekelwe tracks iinkcukacha kunye amaphepha ezifakelwe inkqubo kokufaka iindiza. Le nkampani ithe trialed isicelo kunye umthengisi-amafutha, Gazpromneft-Aero, kunye Alfa-Bank, ibhanki ezinkulu eRashiya, xa ibhabha zasekhaya esekelwe ngaphandle Tolmachevo Airport International. isekela intloko S7 ukuze information technology wathi “Lo msebenzi trading ezenzekelayo phakathi kwamaqela ezintathu: ibhange, i moya kunye nomboneleli amafutha…”
Ngokuka S7, idatha izabelo isicelo malunga imfuno ipetroli edolweni ekwabelwana, ikopi leyo ilawulwa ngamnye amaqela amathathu. Further, iintlawulo amafutha iyakwenziwa kumsebenzi womnatha, ii-invoyisi digital wadala nge contract smart ngexesha tranasction ngalinye. Injongo kukuba okukhawulezisa transactions “ngaphandle kokufuna iintlawulo kwangaphambili kunye uqinisekisa yebhanki,” le nkampani ithe. Kuqhuba ukuba ubuchwepheshe engenalo “inani imisebenzi manual,” yonke inkqubo ithathe “60 imizuzwana.”
Iran ityhila cryptocurrency kazwelonke njengoko US ukwayo ezivele
Ulawulo ngokozwi yobuthixo Iran usityhilele iinkcukacha cryptocurrency yayo ukuphendula United States-ekhokelwa ukwayo zoqoqosho. cryptocurrency elizayo Iran kukaThixo exhaswa Rial kunye iphuhliswe Linux Foundation-ekhokelwa open-umthombo Hyperledger zobugcisa. Ngokungafaniyo cryptocurrencies amagunya ezifana Bitcoin esikhutshwe ukuthobela buboniswe, Iran i-digital Rial ukhululeka isekelwe phezu isigqibo lebhanki yazo engundoqo, currency yedijithali Iranian ngeke misela ukuba, kunye neerekhodi yayo intengiselwano kuphela zinokufumaneka a blockchain yabucala.
"Iziseko umele ukuba abe ecosystem ekhoyo yeebhanki Iranian kunye neenkampani ezisebenzayo cryptocurrencies kwindawo emva kokuba uvavanywe kunye kwakhona.” Le nkqubo iza trialed njengesixhobo sentlawulo ozalwa kwisigaba 1, naphakathi intlawulo basekuhlaleni kwiSigaba 2. saeed Mahdiyoun, usekela mlawuli kwe Supreme abazimele Council, i-arhente amanyeneyo ngurhulumente esweni ukulawulwa Iranian kwedrafti lwemali yedijithali uthe imizamo “ukukhulula Iran ukusuka xi ngamaqhinga yezoqoqosho ulawulo Trump kaThixo.”
platform mali crypto Brazilian Atlas igqekeziwe, idatha 264,000 abasebenzisi avuza
platform mali cryptocurrency Brazilian Atlas iye zangena. Nangona nkampani ithi imali abasebenzisi 'zikhuselekile, ulwazi lobuqu phezu 264,000 zabathengi uye avuza. Ukuqaphela isiganeko, Atlas yakhupha ingxelo nangokuyityhila izakuba asungule uphando yesehlo ngoxa ndandisebenza kwabasemagunyeni. Kuqhuba ukuba nangona imigewu ikwazile ukuba ivuze idatha yomsebenzisi, akukho mali yabiwa.
Atlas wahlabela mgama le nkampani ukwamukela amanyathelo okhuseleko entsha & ukuba oko esweni akhawunti abachaphazelekayo. Ngokwe ngxelo, ngenxa "yezizathu zokhuseleko" notsalo-akhawunti angabekwa ngoku.
Bemithetho U.S. Congress...
Ingabe 2019 be the year of mass ...
Post Previous:Blockchain News 27.08.2018